Ukudla okunothe ngensimbi ekudleni kwengane | Bezzia
UToñy Torres | 10/05/2022 23:55 | Babies
Izakhi ezibaluleke njenge-iron, ezidlala indima ebalulekile ekukhuleni kanye nempilo ejwayelekile, azikwazi ukuntula ekudleni kwengane. Ezinyangeni zokuqala zokuphila, ingane ithola okusansimbi nezinye imisoco eyidingayo ngobisiNgakho-ke, kubalulekile ukuthi umama alandele ukudla okuhlukahlukene kakhulu nokulinganisela ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa.
Kodwa lapho ukunceliswa okuhambisanayo sekufikile, leso sigaba esijabulisayo lapho umntwana ethola ukudla okuqinile, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ukudla kuhlangabezana nezidingo zomsoco ezidingwa umntwana. Phakathi kwazo, umnikelo wensimbi kubaluleke kakhulu ukugwema, phakathi kwezinye izinkinga, i-anemia, ukuphazamiseka okuthi ezinyangeni zokuqala zokuphila kungabangela ukuphazamiseka okukhulu ekukhuleni kobuchopho.
1 Ukudla okunothe nge-ayoni okumele kufakwe ekuphakeleni
1.1 Ukudla okucebile nge-heme iron
1.2 insimbi engeyona i-heme
1.3 Ukudla okulinganiselayo ukugcina amazinga e-iron alungile
Ukudla okunothe nge-ayoni okumele kufakwe ekuphakeleni
Ngaphambi kokubheka ukudla okunconywe kakhulu okucebile ngensimbi ekudleni komntwana, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukudla okuyinhloko phakathi nonyaka wokuqala ukuncelisa. Ngakho-ke, akufanele ukhathazeke ngezilinganiso zokudla, inani lokudla ingane yakho ekudlayo noma uma ithanda umkhiqizo kakhulu noma ngaphansi. Lokho kuzoxazululwa kancane kancane, ngoba ukuthola ukudla okuqinile kuyinqubo kancane kancane futhi umnikelo wokudla okunomsoco uzombozwa ngobisi ngalowo nyaka wokuqala.
Nokho, lapho ingane yakho ishesha ukujwayela ukudla zonke izinhlobo zokudla, kuyoba lula kuwe ukunikeza ingane yakho ukudla okuhlukahlukene nokunokulinganisela. Uma kucatshangelwa ukuthi ezinganeni eziningi ukudla kuyinkinga, ukuzenza zingaphikisi noma yikuphi ukudla kuwukunqoba ngokuphelele. Ingabe kuyoba impumelelo eqinisekisiwe uma amukela konke ukudla njengengane? Cha, akukho okuqinisekile kulokhu kuphila, kodwa kukhona ingane yakho cishe izokwenqaba ukudla okumbalwa.
Kulesi sidlo esiqala cishe izinyanga eziyisi-6, ukudla kwethulwa kancane kancane. Okokuqala izithelo nemifino egayeka kalula, okusanhlamvu nokunye ukudla okuzovela kancane kancane. I-ayoni ikhona kuzo zonke, nakuba ingekho ngezilinganiso ezifanayo. Ukuze uthuthukise ukutholakala kwe-iron ekudleni kwengane futhi unciphise ingozi ye-anemia, kufanele ufake lokhu kudla okune-iron.
Ukudla okucebile nge-heme iron
I-ayoni iyiminerali etholakala ekudleni okuningi, nakuba ingekho ngezinga elifanayo, futhi ayithathwa ngumzimba ngendlela efanayo. Ukuhlukanisa insimbi kubaluleke kakhulu ukuze ukudla komntwana kube nokulinganisela futhi ukusetshenziswa kwakhe kwalesi sakhi kwanele. Ngakolunye uhlangothi sine-heme iron, okuyiyo evimbela ukuntuleka kwe-iron anemia.
Lolu hlobo lwensimbi lutholakala ekudleni okuvela ezilwaneni., ikakhulukazi enyameni ebomvu nasezinyameni zesitho. Ukudla okunengxenye ephakeme kakhulu ye-heme iron isibindi, izinso, igazi, inhliziyo noma izinkwa ezimnandi. Nokho, akukona ukudla okufanele ukudla kwengane. Ngenxa yalesi sizathu, kungcono ukuqala ngokunye ukudla okufana nenyama ebomvu ngamanani amancane bese wengeza nge-non-heme iron.
insimbi engeyona i-heme
Kulokhu insimbi ivela ekudleni okusekelwe ezitshalweni, ngakho-ke ukuhlushwa kwe-iron kuphansi futhi ukuze umzimba uwufake kahle, kuyadingeka ukwengezela ngokudla okucebile ku-vitamin C. Phakathi kwemifino ecebile ngensimbi sinesipinashi, i-broccoli, i-chard nokunye ukudla okuvela kwemifino efana udali noma okusanhlamvu.
Ukudla okulinganiselayo ukugcina amazinga e-iron alungile
Ukuze umntwana akhule futhi athuthuke kahle, kubalulekile ukuthi ukudla kwakhe kuhluke futhi kulinganisele, ngoba kuphela ngakho uthola zonke izakhamzimba ezidingwa ngumzimba wakho. I-ayoni, njengoba sesibonile kakade, ibalulekile, njengezinye izakhi ezifana ne-calcium, amavithamini noma amaprotheni. Ngenxa yalesi sizathu, uma isingeniso sokudla okuqinile sekuqala, kungcono kakhulu ukusiza ingane ukuthola zonke izinhlobo zokudla ukuze ukudla kwayo kuhluke ngokuphelele, kulinganisele futhi kunempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Babies » Ukudla okunothe nge-ayoni ekudleni kwengane